भदौ २५ गते बुधबार तपाईंको भाग्य कस्तो छ ? पढ्नुहोस – Jaljala Online
Posted on September 10, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
मिति २०७६ साल भदाै महिनाको २५ गते बुधवार । अंग्रेजी पात्रोअनुसार २०१९ सेप्टेम्बर महिनाको १० तारिक रहेको छ । यो संगै भोली तपाइको कतै यात्रा गर्ने उपयुक्त साइतको खोजीमा हुनुहुन्छ भने पुरुषको नेतृत्वमा पूर्व र दक्षिण दिशाको तथा स्त्रीको नेतृत्वमा उत्तर र पूर्व दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ । तर बाध्यतावश यात्रामा निस्कनै पर्ने छ भने मिठाइ वा तिल खाएर जुनसुकै दिशाको यात्रा गरेमा पनि शुभफल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ ।
Posted on September 27, 2019 Author Jaljala Online
२०७६ असोज महिनाभरी तपाइको भाग्य कस्तो छ ? पढ्नुहोस
मेष ( चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ ) मेष राशिका लागि असोज महिना नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका मिल्नेछ । इच्छा र आकाङ्क्षा पूर्ण हुने भएको छ । शुभारम्भको चर्चा चल्नेछ । विशिष्ट व्यत्तिको भेटघाटले मन प्रसन्न हुनेछ । लामो समयदेखि रोकिएका अधुरा कामहरु पुरा हुनेछन् । प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनुका […]